အင်္ဂလိပ်ပုံစံ L ပုံစံထည်ဆိုဖာ living ည့်ခန်းတော် ၀ တ်စုံအခန်းဆိုဖာ. ခရမ်းရောင်စပျစ်သီး, ရင်ခုန်စရာနှင့်ကြော့, စပျစ်ရည်ကိုမြက်မြည်းစမ်းခြင်းမှခံစားမှုနှင့်အတူပြီးပြည့်စုံသောပွဲစဉ်. သင့်ရဲ့ဝယ်လိုအားမှချိန်ညှိ headrests လိုက်လျော, သင်လိုအပ်သည့်အခါတိုင်းသူတို့ကိုဖယ်ရှားသို့မဟုတ်ကိုင်ထားပါ. သံမဏိဘောင်နှင့်ထိုင်ခုံခုံများတွင်အိတ်ကပ်ပါ ၀ င်မှုသည်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့်အတူထိုင်ခုံခံစားမှုကိုအတူတကွခံစားစေသည်.
အမျိုးအစား: အိမ်သုံးပရိဘောဂ, ဟိုတယ်လော်ဘီပရိဘောဂ
ပစ္စည်း: အထည်; သံမဏိခြေထောက်; အစိုင်အခဲသစ်သား&အထပ်သား; အမြှုပ်
ထုတ်ကုန်အမည်: တော်ဝင်ထည်ဆိုဖာ; L ပုံစံအိပ်ရာ; အပိုင်းဆိုဖာ
function ကို: ပုဒ်မထည်ဆိုဖာ
အတိုင်းအတာ(စင်တီမီတာ): 279L ကို * 201W * 71 / 93H
ထုပ်ပိုးအရွယ်အစား(စင်တီမီတာ): 183L ကို * 107W * 95H; 106L ကို * 206W * 95H